ROOT မပါပဲ Amazon Fire HD တွင် Google Play စတိုးတပ်ဆင်ပုံ Androidsis
Google Fire Store ကို Amazon Fire HD မည်သည့် Tablet တွင်မဆို ROOT နှင့် ADB မပါပဲမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Manuel Ramirez | | Android Root ပါ, NOTICIAS, Android တက်ဘလက်များ, Android cheat, လဲ tutorial
ဤသင်ခန်းစာကို ၂၀၂၀၊ ဇွန် ၁ ရက်အထိ update ပြုလုပ်သည်
အမေဇုံတက်ဘလက် သူတို့ကိုဒိုးနပ်လိုရောင်းခဲ့ရတယ် နီးပါးသလောက် တရုတ်တက်ဘလက်, သူတို့တစ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကစတင်ခဲ့သည်ကတည်းက။ မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာအမျိုးအစားအားလုံး၏မျိုးပွားမှုအတွက်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၎င်းဈေးနှုန်းအရဒီ HD ဝင်ငွေရဲ့တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုယူရို ၉၉.၉၉ နဲ့ဝယ်ပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးဝယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး.
ဒီတက်ဘလက်တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ Android fork version ရှိရင် Google Play Store မှာသူ့ကိုယ်ပိုင် Amazon စတိုးဆိုင်ရှိလို့မရဘူး။ ဒီစတိုးဆိုင်မှာလုံးဝမကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Android မှာ Google မှအပ်နှံထားတဲ့ application များနှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများမပါ ၀ င်ပါ။ အားလုံးဆုံးရှုံးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ အကယ်၍ သင့်တွင် Amazon မှ Fire HD တက်ဘလက်ရှိပါကသင်သည်အောက်ပါအဆင့်များသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းအတွက်ပြုလုပ်ထားသည့်အတိုင်းလိုက်နာပါက Google Play Store ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ စကားမစပ်, သငျသညျပင်အမြစ်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ADB command များကိုမသုံးပါနှင့်။
မည်သည့် Amazon Fire HD tablet တွင်မဆို Google Play စတိုးကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ဗီဒီယိုမှာ Amazon Fire HD 8 ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးသားပါ ငါမကြာသေးမီကငါ့ပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ကြုံတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာ ၎င်းသည် ၇ လက်မအရွယ်ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ် ၈ generation ၉ မျိုးဆက်တက်ဘလက်သစ်ဖြစ်ပါက Amazon မီးမည်သည့် tablet အတွက်မဆိုသင့်လျော်သည်, ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုရွှေ့ကြကုန်အံ့။
မသန်စွမ်း လိုအပ်သော APKs ကို install လုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်တာဝန်ဝတ္တရားမဟုတ်သော်လည်း၊ သင် download လုပ်ထားသော notification bar ရှိ click နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်မည် ES File ကို Explorer ကို အမေဇုံစတိုးဆိုင်၌တွေ့။ အခြားမည်သည့်စူးစမ်းရှာဖွေသူမဆိုလုပ်လိမ့်မည်။
အခုငါတို့သွားရတော့မယ် ချိန်ညှိချက်များ> လုံခြုံရေး မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတက်ကြွစွာထည့်သွင်းပါ
အောက်ပါဖြစ်ပါသည် APK လေးခုလုံးကို download လုပ်ပါထို့နောက် sa သူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အတိုင်းထည့်သွင်းပါ:
ဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများ ၂၀.၁၈.၁၇ (20.18.17-000300) (311416286)
Google Play စတိုး 20.3.12 - အားလုံး  [PR] 312847310 (nodpi) (Android 4.1+)
ဤအရာဖြင့်သင့်တွင်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးနှင့်ရှိလိမ့်မည် အားလုံးဆက်စပ်န်ဆောင်မှုများအပါအဝငျ ဂိမ်းများကိုရန်။ ဤနည်းဖြင့်ကြီးမားသောအတွေ့အကြုံများကိုပေးသောတက်ဘလက်တစ်ခုမှကြီးမားသည့် repertoire အက်ပ်များကိုသင်ရနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်၏ app များကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့ ကစားစတိုးအခမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ကမ်းလှမ်းမှုအပိုင်းကိုသွားလျှင်သင်နေ့တိုင်းရနိုင်သည်။
ငါ Google Play စတိုးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Google Fire Store ကို Amazon Fire HD မည်သည့် Tablet တွင်မဆို ROOT နှင့် ADB မပါပဲမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သိုမဟုတ် Keyboard သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အအေးမခံနိူင်ပါ။ မီးအသစ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအရာသည်ယခင်များမှသင်ခန်းစာများကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည့်အသစ်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်တွင်ဗားရှင်း ၅.၃.၃.၀ ရှိပြီးဂူးဂဲလ်ကစားခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည်အလုပ်မလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ပ်သည်သိမ်းဆည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သော Clash Royal နှင့် Clash Clan များကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုကစားချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမြဲငါ့ကိုပျက်ကွက်။ ဝန်ဆောင်မှုများကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မလား ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ ကျွန်ုပ်တွင် Kindle Fire 5.3.3.0 hd ရှိသည်။ Software ကိုဗားရှင်း 7
Grey Cat ကိုပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၌ OS version 4.5.5.2 ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ Kindle Fire HDX ရှိ play store ကို download ပြုလုပ်နိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တွင် Kindle HD စနစ်ပါရှိသည်။ ဗားရှင်း 7.5.1_user_5170020
ကျွန်ုပ်ဖိုင်များကိုကူးယူပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်ပထမတစ်ခုကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအထုပ်နဲ့အတူ parse အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးငါ့ကို install မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ် ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
ဂူဂဲလ်ကစားနည်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ "အချက်အလက်စစ်ဆေးခြင်း" မှာတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
ကျွန်ုပ်တွင်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် apk ကို download လုပ်၍ ၎င်းကိုထည့်သွင်းလိုသောအခါကျွန်ုပ်သည် package ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပျက်ကွက်သွားသောအခါအခြားနေရာများမှ download ကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်သော်လည်း၎င်းသည်ထိုနေရာတွင်မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မီး 2015 in မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြန်ခဲ့ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရပါတယ်။ ဒီအကူအညီတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးလုပ်ပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ Store Store ကတက်ဘလက်အက်ပလီကေးရှင်းမှာဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူး။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Laura c ကိုပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ခိုင်လုံသောထောက်ခံချက်၊ ၎င်းသည်မီး hd10 ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Carlos Eduardo ကိုပြန်သွားပါ
Carle soler ဟုသူကပြောသည်
ငါအရာအားလုံးကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် playstore icon က desktop ပေါ်မှာမပေါ်ပါဘူး။
Carles Soler သို့ပြန်သွားပါ
Ramon Telleria ဟုသူကပြောသည်
ငါ 10 HD ကနေမီး HD ကို9Tablet ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ မျိုးဆက်, ဇန်နဝါရီလ 24 ရက်နေ့တွင်; ၃၀ နှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်လက်၌ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှာနေသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းမှဂူဂဲလ်ပလေးကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်မဖွင့်သော်လည်း ဒီကနေယနေ့အထိဤကဲ့သို့သောထားခဲ့တယ်။
ငါလိုအပ်သည်ဟုဆိုကြသည်အချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ငါမြင်အချို့ဖိုင်များကိုရှာဖွေနှင့် download လုပ်; ငါဗားရှင်းအတော်များများကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အဘယ်သူမျှမအလုပ်။
ရသည်မှာဒီခေတ်သစ်များတွင်မရှိတော့ပါ၊ သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။
Ramón Telleria အားစာပြန်ပါ
10th ၏မီး HD ကို9ရှိသည်သောသူတို့အား။ မျိုးဆက်ငါဒီဗီဒီယိုအကြံပြု; သူတို့ကအတူအလုပ်လုပ်သောဖိုင်များကိုပူဇော်ကတည်းက။
အားလုံးကိုကံကောင်းပါစေ မင်းရဲ့အချိန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။
Jose Dominguez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာမီး ၈ လုံး၊ ၈ မျိုးဆက်၊ OS 8 ရှိတယ်။ ငါမသိသောဇာစ်မြစ်၏ apps များခွင့်ပြုပါ။ Play Store မှ apk လေးခုကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်“ account manager »ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်၊ သို့သော်အလုပ်မလုပ်ပါ။ Google Account Manager မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပြီး၊ ကျွန်ုပ် install လုပ်ရန်လုပ်ပြီး၊ "application not install" ပေါ်လာသည်၊ အထုပ်သည်အကျင့်ပျက်နေသည်။
ငါဒီ apk နှင့်အတူတူပင်အမှားထက်ဟောင်းများဒေါင်းလုပ်လုပ်ဗားရှင်းကြိုးစားခဲ့သည်။
jose dominguez အားပြန်ပြောပါ
ဒုတိယ link သည်အလုပ်မလုပ်ပါ
ဟိုင်းလို၊ ကျွန်ုပ်ဒုတိယ link ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်။ ဘယ်တစ်ခုကိုရည်ညွှန်းနေတာလဲ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
ငါခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းပြီးပြီ။ နောက်ဆုံးအဆုံး၌“ စစ်ဆေးရေးအချက်အလက်” တွင်ကျန်ရှိနေသေးသည့် play store လက်ဆွဲအိတ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ သူ့မှာမိနစ် ၂၀ လောက်ရှိနေပြီ။ ငါသည်သင်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတန်ဖိုးထားတယ်။
Bullet Echo သည် Zeptolab ၏ထိပ်တန်းအမြင် 'Cut the Rop' ကိုထုတ်လုပ်သည့်စစ်မြေပြင်တော်ဖြစ်သည်
ဒါကြောင့် Taskbar မှာရှိတဲ့ Samsung DeX လို desktop mode ကိုသူ့ရဲ့ version 6.0 နဲ့ activate လုပ်နိုင်ပါတယ်